मालवेयर के हो - अर्ध अभ्यास
मैलवेयर पनि दुर्भावनापूर्ण सफ्टवेयरको रूपमा चिनिन्छ। यो धेरै दुर्व्यवहार र खतरनाक उपकरण को संदर्भित गर्दछ जुन तपाइँको कम्प्युटर उपकरण को क्षति र भाइरस फैलन्छ, Trojan horses, worms, adware and your computer systems to spyware।
ओलिवर राजा, सेल्टल्ट ग्राहक सफलता प्रबन्धक, भन्छिन् कि यो गलत हुनेछैन भन्नको लागि कि मैलवेयरले गोप्य रूपमा तपाइँको कम्प्युटर यन्त्रहरूलाई कष्टमा पार्छ वा तपाइँको व्यक्तिगत डेटा चोरी गर्दछ। यसले तपाईंको ज्ञान बिना तपाईँको उपकरणको पहुँच पनि सीमित गर्न सक्छ। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका मालवेयरहरू छन्, जस्तै स्पाइवेयर, फिसिङ, rootkits, ब्राउजर हाइजरहरू, र ransomware।
मालवेयर कहाँ देखि आउँछ?
प्रायः, मैलवेयर र भाइरसहरूले तपाईंको कम्प्युटर यन्त्रहरू प्रविष्ट गर्दा जब तपाई अज्ञात ईमेल संलग्नकहरू खोल्नुहुन्छ वा ठूलो संख्यामा पप-अप सन्झ्यालहरूमा क्लिक गर्नुहुन्छ। तिनीहरू वेबसाइटहरू, खेलहरू, अनलाईन डेमोहरू, अडियो र संगीत फाइलहरू, सफ्टवेयर, उपकरणपट्टीहरू, निःशुल्क सब्स्क्राइब अफरहरू, र तपाईंले अज्ञात स्रोतहरूबाट डाउनलोड गर्नुहुने कुनै पनि यन्त्रहरू इन्टरनेट-भाइरस र विरोधी मालवेयर उपकरणहरूसँग सुरक्षित छैनन्।
मालवेयर को पहिचान कसरि गर्नुहोस
यदि तपाई नियमित रूपमा इन्टरफेस सर्फ गर्नुहुन्छ र विभिन्न वेबसाइटहरू प्रयोग गर्नुहोस् वा आफ्नै साइटहरू चलाउनुहुन्छ भने, तपाइँ सम्भावित भाइरसको वा मालवेयरको शिकार हुनसक्दछ। एक ढिलो कम्प्यूटर एउटा चिन्ह हो जुन तपाईंको कम्प्युटर उपकरणहरू भाइरस र मालवेयरसँग संक्रमित हुन्छन्। यदि तपाईंले पप-अप सन्झ्यालहरू देख्नुहुन्छ भने, घोटाला र बारम्बार दुर्घटनाहरू, तपाईलाई मैलवेयरको पीडाको लागी सम्भावित हुनसक्दछ। त्यस्ता परिस्थितिहरूमा, यो महत्वपूर्ण हो कि तपाइँ मालवेयर स्क्यानरहरू प्रयोग गर्नुहोला र जब तपाइँ इन्टरनेट प्रयोग गरिरहनु भएको छ।.धेरै धेरै एंटी-मैलवेयर र एंटीवायरस सफ्टवेयर र प्रोग्रामहरू इन्टरनेटमा उपलब्ध छन् जुन तपाईंको कम्प्युटर यन्त्रसँग सम्झौता गर्न र तपाईंको पहुँच सीमित गर्न चाहन्छ।
मैलवेयर कसरि हटान
भाइरसहरू र मालवेयरबाट छुटकारा पाउन उत्तम तरिका मध्ये एक विश्वसनीय मालवेयर हटाउने उपकरणहरू र एंटीवायरस सफ्टवेयर प्रयोग गरेर। इन्टरनेटमा एक ठूलो संख्या उपलब्ध छन्। एक सफ्टवेयर चयन गर्दा, तपाईं सावधान हुनुपर्छ र यसको विशेषताहरू जाँच्नु पर्छ। मलाई यहाँ भनौं कि सबै सफ्टवेयर र प्रोग्रामहरूसँग राम्रो हुन सकेन। अधिकतर फ्री एंटी-मैलवेयर र एंटीवायरस सफ्टवेयर तपाइँको कम्प्युटरको लागि खराब छ। केहि भुक्तान गर्न राम्रो छ र भुक्तान गरिएको संस्करण प्राप्त गर्नुहोस् इन्टरनेटमा सुरक्षित हुने तपाइँको संभावनालाई अधिकतम। Avast नि: शुल्क एंटीवायरस र एंटी-मैलवेयर उपकरणहरू सँगै जान सकिन्छ र मिनेट भित्र कुनै वैध वेबसाइट बाट स्थापना गर्न सकिन्छ।
आफैलाई सुरक्षित राख्न विरोधी मलवेयर प्रयोग गर्नुहोस्
एंटीवायरस र एंटी-मैलवेयर उपकरणहरू प्रयोग गर्न मैलवेयर पहिचान गर्न, हटाउन र रोक्न भन्दा राम्रो छैन। उत्तम र सबैभन्दा भरपर्दो सफ्टवेयर अवास्ट हो। यो तुलनात्मक रूपमा उच्च र उद्योग विशेषज्ञहरु द्वारा मूल्याङ्कन गरिएको छ। यो उपकरण विश्वभर लाखौं व्यक्तिद्वारा डाउनलोड गरिएको छ, र यो प्रदर्शन उत्कृष्ट छ। यसको केहि प्रसिद्ध विशेषताहरू अनावश्यक पासवर्ड प्रतिभूतिहरू, गृह सञ्जाल सुरक्षा, स्वच्छ र सफा ब्राउजिङ्ग हुन् र यी सबै चीजहरूको लागि निःशुल्क आउँछन्।
तपाइँ अन्य कम्पनीहरूको विरोधी-मैलवेयर स्क्यानरहरू जस्तै माइक्रोसफ्ट ठूलो संख्यामा उपलब्ध छन् पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। उनीहरूले तपाइँको अपरेटिङ सिस्टमलाई सुरक्षित राख्छन् र तपाइँले इन्टरनेट प्रयोग गरिरहनु भएको बेला भाइरस र क्यामेराहरू टाढा रहन्छन्। एंटी-मैलवेयर कार्यक्रमले यी चीजहरूको विरुद्ध सुरक्षा प्रदान गरेर मालवेयर र भाइरसलाई लड्न सक्छ। तिनीहरू दैनिक आधारमा चल्नुपर्छ; तपाईं सफ्टवेयर को अद्यतन संस्करणहरु लाई स्थापित गर्न को प्रयास गर्नु पर्छ ताकि इंटरनेट मा तपाईंको सुरक्षा को गारंटी हो।
. - affordable windows server hosting